Hoy ny Eveka… | GAZETY_ADALADALA
Hoy ny Eveka…
Posted on 31/05/2010 by gazetyavylavitra
(Joany 8, 32)
« Homba antsika mianakavy mandrakariva anie ny Fiadanan’ny Tompo… »
Izahay ato amin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, rehefa nivory talohan’ny fananganana ny Arsidiosezin’i Toamasina, dia nifampizara ny fiainam-pirenena ka mahatsiaro indrindra ny Taon-jobily lehibe dia ny faha-50 taonan’ny Fahaleovan-tenam-pirenana.
Efa maro ny hafatra nampitainay Eveka Raimandreninareo mikasika ny zava-misy iainantsika tato ho ato, anisan’izany ny fiangaviana ny rehetra amin’ny anaran’ny Fitiavan-tanindrazana mba samy hitazona ny teny nomeny (jereo Taratasy marsa 2009).
Na izany aza dia mbola manantitrantitra izahay fa tsy vahaolana velively ny famafazam-bola sy lainga noho ny ady seza izay mahatonga herisetra, hatramin’ny fandatsahana aina aza.
– Ny Vahoaka:
Manjaka amin’ny toerana rehetra ny tsy fandriam-pahalemana. Misara-bazana ny mpianakavy, ny asa tsy misy, ny hevitra politika tsy mitovy mampisavorovoro. Eo koa ny fihanaky ny zava¬madomelina isan-karazany ka mitera-doza mahatsiravina. Misy ny haino aman-jery tsy manabe fa mandranitra korontana mety hahatonga ady an-trano. Ny tafika, tandroka aron’ny vozona dia voasedra mafy koa tato ho ato.
– Ny Mpanao politika:
Mikatso tanteraka ny fifanakalozan-kevitra noho ny tsy fahaiza-mifampihaino sy ny fifankahalana. Vokatr’izany tsy hita intsony ny soa iombonana ary very ny hasin’ny fitiavan-tanindrazana.
– Ny Kristianina sy ireo olona tsara-sitra-po:
Rendrika ao anatin’izany fahasahiranana izany koa ny Fiangonana ka takona ny maha-Mpaminany sy maha-Mpampiombona ary Fahazavana azy.
Karazam-bahaolana… tsy nahomby
Maro samihafa ny fitadiavana vahaolana naroso nefa izay nantenain-kanirina indray no vao mainka nampivandravandra (Le Hintsy, GIC, Ankolafy efatra nentina tany ivelany…)
Tsy nahitam-bokatra sy nandamoka ireo soso-kevitra politika naroso nentina nandaminana ny krizy. Mahatonga saina ireny satria izao no mbola mahazo ny firenena ankehitriny. Na ilaina aza ireo fanelanelanana iraisam-pirenana dia niarahantsika nahita fa nisy fetrany ny fahombiazan’ireny satria ny tena tompon’ny olana sy ny tompon’ny vahaolana dia isika samy Malagasy.
– Vondrona sy fikambanana samihafa:
Misy ihany koa ireo te-handray andraikitra manoloana izao fiainam-pirenena mikatso izao ka manao fanambarana sy hetsika amin’ny fitadiavana vahaolana nefa toa vao maika miteraka fisavorovoroana ara-piaraha-monina, ara-toe-karena sy ara-politika, eny ara-pivavahana aza. Ampahatsiahivinay etoana fa amin’ny maha olo-pirenena sy amin’ny maha-kristianina dia zony ary adidiny ny maneho ny heviny. Manahy anefa izahay sao lasa fitaovana hanamarinan-tena ny finoana kristianina. Izany dia mifanohitra tanteraka amin’ny fampianaran’ny Fiangonana katolika.
Tolo-kevitra sy fampirisihina
– Faha-50 taonan’ny fahaleovan-tena
Ato ankatoky ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fahaleovan-tenam-pirenena isika no miatrika izao toe-java-manahirana izao. Misy ireo nalaim-panahy ka nilaza fa tsy nisy zava-bita hatramin’izay fahaleovan-tena izay. Fomba fijery tsotra loatra izany satria betsaka mihitsy ireo zava¬tsoa noraisintsika: ny fivoaran’ny sekoly, ny toeram-pitsaboana, ny toeram-ponenana, ny fitaovam¬pifandraisana… Mankasitraka sy mankatelina an’ireo rehetra tia tanindrazana, niara-nisalahy tao anatin’ny fihavanana nahatontosa an’ireo soa iombonana ireo.
Mbola maro anefa ny lesoka, ka ilàna fifanomezan-tànana mba hitondra antsika amin’ny fampivoarana sy fiadanana izao fankalazana izao. Izahay Eveka Ray amam-dreninareo àry dia manantitrantitra ny fanomezana lanja ny fandavorariana ireto lafin-javatra manaraka ireto:
– Ny Fibebahana
Araka ny hafatra tamin’ny karemy hoe: » mibebaha ary minoa ny Evanjely », sy raha te-hanarina ny firenentsika marina tokoa isika dia tsy maintsy miaiky heloka aloha ka miala amin’ny fitiavan-tena tafahoatra sy ny fialonana fa hampanjaka ny fahamarinana ary hanao ho vaindohan-draharaha ny tena fitiavan-tanindrazana sy ny fitsinjovana ny soa iombonana.
– Ny fihavanana:
Marary ny fihavanana izay soa toavina lehibe indrindra amintsika Malagasy. Ny fitiavam-bola sy voninahitra tafahoatra no mahatonga izany. Mila fanasitranana haingana sy hentitra io, tsy amin’ny ara-politika fotsiny ihany fa amin’ny alalan’ny fiombonana sy ny fiaraha-mientana entanin’ny fanajana ny maha-olona, ny fahamarinana sy ny fitiavana nampianarin’i Kristy.
– Ny firotsahana:
Tsy manolotra na manohana rafi-pitondrana manokana ny Fiangonana katolika. Ity rafitra Teteza¬mita ity kosa anefa dia irinay hifarana haingana sy amin’ny fomba mendrika. Mitaky fandraisana adidy sy andraikitra amim-pahendrena sy fahamarinana ny firotsahan’ny tsirairay amin’izany.
Fifidianana madio no kendrentsika ka ilàna fiaraha-manomana mba ho lavorary ny fanatanterahana azy. Dia mba ho rafitra marim-pototra sy mateza anie no holovain’ireo taranaka amam-para.
« Tahionao ry Zanahary ity Nosindrazanay ity ». Izany tonom-bavaka ao amin’ny hiram-pirenentsika izany no itondranay tso-drano feno sy iarahabanay anareo sahady tratry ny fetim-pirenena ary hanentana antsika rehetra hiara-hivavaka ho an’ny tanindrazantsika. Ankinintsika amin’i Masina Maria Mpiaro an’i Madagasikara ireo ezaka iarahantsika manatanteraka ireo, mba hiadam-pinaritra isika mianakavy.
Antananarivo faha-28 Mey 2010
Filed under: ady sy fifandirana, anao ny fitenenana, fiaraha-monina, fifandraisana iraisam-pirenena, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: 28 mey 2010, Antananarivo, eveka, fahaleovantena, Madagascar, mpaminany |
« Governemanta vaovao: ny Firafiny Innovation Fund (part 1) »